Họtelu ndi di na Owerri, Imo - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Hotels in Ikenegbu
Hotels in Works Layout
Hotels in Commercial District
Hotels in Ugwu Orji
Hotels in World Bank Project
Hotels in Prefab Area
Hotels in Egbu
Owerri is the Capital of Imo state, dubbed the Eastern Heartland. Famous for ...
Owerri, "Heartland" bụ otu obodo na Imo Steeti, mba ọwụwa anyanwụ nke Nigeria di na ala Igbo. Dị ka akụkọ ihe mere eme mgbe ochie, atọrọ ntọala Owerri site na aka otu nwoke a na-akpọ Ekwema Arugo. Ọ bụ nwa nwoke Uratta achupuru achupu n’ike n’ihi oke ihe aru omere. Owerri bụ isi obodo nke Biafra na afo 1969. Enugu, Aba, na Ụmụahịa bu ebe ndị ọzọ buru isi obodo tupu Owerri.
Isi obodo nke steeti ndi choro innoro onwe ha bu nke nọgidere na mbughari dị ka ndi agha no na anwude isi obodo ndi nke ochie. Owerri di na ebe ide mmanụ oji (crude oil) dị ka na ọtụtụ ala Igbo ndi ozo. Owerri nwekwara ọhịa mmiri na akoputa ọtụtụ ihe olu ugbo ndị dị ka ji, akpụ, taro, ọka, roba na mmanụ nkwụ
N'ihi na obodo a bụ ebe di nma nke ukwu, ndi njem nleta na a bia na ya mgbe nile. Ole na ole n'etiti ọtụtụ ihe ndi bara uru na-nleta bu- ; Ebe ogige ihe ntochi nke Owerri (Owerri Amusement Park), Ebe a na azu anumanu nke di na Nekede (Nekede Zoo) , Ebe a na eme ihe omenala na osise ihe nke di na Mbari (Mbari Cultural & Art Centre) na Oguta Leeki, n'oge agha, Oguta Leeki nọ na eje ozi dị ka ebe esi akpọpụ mmadụ n'ọdụ ụgbọ mmiri nye ndi otu I di na otu nke mba Afrika (United African) . Na etiti nke obodo a bụ ebe a ga achọta.
Ogige omenala na osise ihe nke di na Mbari nke nwere ihe ịtụnanya. Ulo obibi di na Owerri
Odụ ugboelu Sam Mbakwe bu ya bu ọdụ ugboelu eji eme njem na Owerri, nke di na kilomita iri abuo na ato banye na ndịda nke obodo Owerri. Na oge na adibeghi anya ugbu a, azụmahịa nke Họtelu aghowo nke di ukwuu na Owerri, ndị mmadụ dị iche iche emepechala họtelu maka ụmụ amaala Owerri na ndi ọbịa.
Nlekota nke ndi ọbịa bu nke na aga ahia na oge ndi a na obodo Owerri. Họtelu ndi dika Rockview Họtelu na Concorde Họtelu diri kemgbe na enye ihe nlekota nke onye ọbịa di nma nke ukwuu na Owerri.
Họtelu New Owerri Họtelu Ikenegbu Họtelu Works Layout Họtelu Nekede Họtelu Ugwu Orji Họtelu Orji
Họtelu Prefab Area Họtelu Egbu Họtelu Egbeada Họtelu Akwakuma Layout Họtelu Okigwe Họtelu Orlu